कस्तो मित्रता ! ८ वर्षकी बालिकाको साथी ११ फुटको अजिंगर » बुद्ध भूमि नेपाल
Home/रोचक/कस्तो मित्रता ! ८ वर्षकी बालिकाको साथी ११ फुटको अजिंगर
काठमाडौं । दुनियामा हामीले मान्छे मान्छेबीचका मात्र होइन मान्छे र जीवजन्तुबीच घनिष्ट मित्रताका अनेक कथाहरु सुन्ने र पढ्ने गर्दछौँ । कतिपय पत्याउनै नसकिने कथाहरु किम्बदन्तीका रुपमा जनश्रुती र किताबहरुमा समेत सुन्न तथा पढ्न पाइन्छ । तर इजरायलमा चाहिँ एकजना ८ वर्षकी बालिकाले डरलाग्दो अजिंगरसँग अनौठो मित्रता कायम गरेको यथार्थ नै हो ।
रोयटर्सका अनुसार इनबर आफ्ना बुवा–आमासँगै दक्षिण इजरायलको एक कृषि समुदायको जनावर पार्कमा अवस्थित घरमा बस्दछिन् । सानैदेखि उनलाई घरपालुवा जनावर निकै मन पर्दथे । इनबर र बेल्लै सानै उमेरदेखि सँगै हुर्किएका हुन् । अहिले दुवै अलिक ठूला भैसकेका छन् । समयक्रमसँगै उनीहरुको मित्रता पनि गाढा बन्दै गएको इनबरकी आमा बताउँछिन् ।
२८ आश्विन २०७७, बुधबार ००:०४